शुक्रवार, माघ ९, २०७७ जनता नेपाल
रोगगारको लागि के कस्ता मापदण्ड छन् ?
मासिक आम्दानी कस्तो हुन्छ ?
यसरी छनौट भएका नेपाली कामदारले इजरायलमा मासिक एक हजार पाँच सय डलर (डेढ लाख नेपाली) पारिश्रमिक पाइन सक्छन । ३ सय २० डलर फन्डमा जम्मा हुन्छ। कामदार फर्किंदा पाउने प्रावधान छ। सुरुमा १ हजार २ सय ८० डलर पाउँछन्।
काम कस्तो हुन्छ?
श्रमको लागि इजरायलमा पुगेका नेपालीले केयर गिभर (वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको रेखदेख) को काम गर्नुपर्छ । इजरायलले केयर गिभर, नर्सिङ क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्रलगायत नेपाली श्रमिक लैजानेछ।
इजरायल जान (हवाई भाडा, स्वास्थ्य परीक्षणसहित) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च नहुने भएकाले इजरायल रोजगारप्रति कामदार आकर्षित छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, माघ ९, २०७७, ०७:३७:५६